IATA: 2019 starts on a positive note for passenger demand | eTurboNews | Dị | Njem Akụkọ Banyere Na ntanetị
Associationtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) kwupụtara nsonaazụ njem ndị njem ụwa maka Jenụwarị 2019 na-egosi okporo ụzọ (njem njem kilomita ma ọ bụ RPKs) bilitere 6.5% ma e jiri ya tụnyere Jenụwarị 2018. Nke a bụ uto kachasị ọsọ na ọnwa isii. Ike Jenụwarị (nke dị kilomita ole na ole ma ọ bụ ASK) dị elu bilitere 6.4%, ihe butere ibu butere pasent 0.1 ruo 79.6%.
“2019 amalitela na nke dị mma, yana ịchọrọ ndị njem ahụike dị ka usoro nke usoro 10 afọ. Agbanyeghị, akara ngosi ahịa na-agwakọta, yana ihe na-egosi na ike adịghịzi ntụkwasị obi azụmaahịa na akụnụba mepere emepe na foto dị omimi karịa mba na-emepe emepe, "ka Alexandre de Juniac, Director General na CEO IATA kwuru.
(% kwa afọ) sharewa share1 RPK J PLP PLF
1% nke ụlọ ọrụ RPK na 2018 2Ya na-agbanwe kwa afọ na ibu ihe 3Load factor level
Ihe ndị njem nke mba dị elu bilitere na 6.0% na Jenụwarị ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa n'afọ gara aga, nke sitere na ịrị elu 5.3% na ọnwa Disemba afọ. Mpaghara niile edeputara uto, nke Europe duziri maka ọnwa nke anọ. Ike mụbara 5.8% na ihe butere ịrị elu 0.2 pasent isi na 79.8%.
• trafficgbọ njem mba ofesi na mba Europe rịgoro 7.7% na Jenụwarị ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga, gbadata site na ịrị elu 8.6% kwa afọ na Disemba. Mmetụta a nwere ike gosipụta enweghị mgbagwoju anya gbasara ọnọdụ akụ na ụba mpaghara ahụ, gụnyere enweghị nghọta banyere Brexit. Ike rịrị 8.8% na ihe butere ida 0.9 pasent ruo 80.3%.
• Ndị na-ebu Asia-Pacific dere mmụba mmụba nke 7.1% ma e jiri ya tụnyere Jenụwarị 2018, siri ike karịa 5.0% uto na Disemba. Ike rịrị elu 5.1%, ihe butere ibu rịrị ihe ruru pasentị 1.5 ruo 81.7%, nke abụọ kachasị elu n'etiti mpaghara ndị ahụ. A na-akwado mmụba mpaghara ahụike site na ịrị elu ego na mmụba n'ọnụ ọgụgụ nke ọdụ ụgbọ elu.
• ndị na-ebu Middle East nwere adịghị ike kachasị ike, na-achọ naanị 1.5% ma e jiri ya tụnyere Jenụwarị 2018. Ka o sina dị, nke a ka dị mma karịa ọdịda 0.1% na December. Ọ kaghị aka ikwu ma mmelite a na-anọchi anya omume. Ike rịrị 3.2% na ibu ọrụ dara 1.3 pasent isi na 75.6%.
• airgbọ elu North America nwetara ịrị elu 4.7% karịa otu afọ gara aga, ka mma site na 3.7% ịrị elu kwa afọ n'ọnwa gara aga, ebe ikike rịrị elu 3.5% na ibu ọrụ mụbara 1.0 pasent isi na 80.6%. A na-akwado ọchịchọ a site n'ọnọdụ akụ na ụba siri ike nke wepụtara ọnụọgụ enweghị ọrụ na ịkwalite mmefu ndị ahịa.
• trafficgbọ njem ụgbọ elu ndị Latin America 'rịgoro 5.8% na Jenụwarị ma e jiri ya tụnyere Jenụwarị 2018. Ọ bụ ezie na nke a na-anọchi anya ntakịrị nro ma e jiri ya tụnyere uto na Disemba nke 6.1%, ihe ịrịba ama bụ na mpịakọta ndị njem emeela ngwa ngwa ntakịrị na ọnwa ndị na-adịbeghị anya na usoro edozi oge. Ike rịrị elu 6.7%, agbanyeghị, na ihe butere ibu bupụtara pasent 0.7 rue 82.8%, nke ka kachasị n'etiti mpaghara ndị ahụ.
• airgbọ elu Africa hụrụ ọhụhụ ụzọ Jenụwarị 5.1%, site na 3.8% na Disemba. Nchegbu gara n'ihu banyere akụnụba kachasị ukwuu n'ógbè ahụ, South Africa na Nigeria, agbanyeghị. Ike mpaghara ahụ bilitere 2.9%, ihe butere ibu wupụtara pasent 1.5 na 70.9%.
Trafficzụ ahịa ụlọ na-arịgo 7.3% na Jenụwarị, afọ na-afọ, ọsọ ọsọ ọsọ kemgbe August na site na 5.6% uto na December. Uzo ahia nile gosiputara uto, China, India na Russia na-edeputa onu ogugu abuo kwa afo. Ike ime ụlọ mụbara 7.5% na ihe butere pịtara pasent 0.1 ruo 79.3%.
India	1.6%	12.4% 16.1%	-2.8%	86.1%
• domesticzụ ahịa ụlọ nke United States rịrị elu ruo ọnwa anọ nke 5.8% na Jenụwarị; Agbanyeghị, n'okwu a gbanwere n'oge oge, usoro a gbagoro agbago kemgbe etiti 2018, ikekwe na-egosipụta nchegbu gbasara echiche akụ na ụba na esemokwu azụmahịa na China.
• domesticgbọ njem ndị Russia rịrị elu na 10.4% na Jenụwarị, site na 12.4% na Disemba, mana na-aga n'ihu na-arịwanye elu na-agagharị na njem ndị njem.
“Ugbo elu bu ahia nke nnwere onwe, na-eme ka anyi nwere onwe anyi site na nsogbu nke odidi ala na uzo, mana ka odi ire anyi choro oke nke ghere oghe maka mmeghari ndi mmadu na ngwongwo. Anyị na-anabata atụmatụ EU kachasị ọhụrụ iji were usoro ezi uche dị na ya iji jigide ma mee ka njikọta n'etiti UK na EU ma ọ bụrụ na Brexit enweghị nkwekọrịta. Ma nke a bụ naanị ihe ga - adịru nwa oge yana Brexit ka edobere maka 29 Machị, anyị na - arịọ ka akụkụ abụọ ahụ kwenye na ngwungwu Brexit zuru oke nke ga - eme ka ndị njem na - enweghị njikọ ikuku na - atụ anya, “ka de Juniac kwuru.